On juin 30, 2019 5 711
Notanterahina ny 28 jona 2019 lasa teo ny lanonana fanambarana,tamin’ny fomba ofisialy ny fijoroan’ny fikambanana High-Five Madagasikara, eo ambany fiahian’ny Tale Jeneraly misahana ny Tanora, avy amin ‘ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena .
Ny High Five Madagasikara dia fikambanana tsy mpanao politika. Ivondronan’ny tanora maro avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, tafaray sy resy lahatra hikolokolo ny tanora ankehitriny sy ny ho avy. Tanjona rahateo ny mba ho tanora, olom-pirenena vanona sy mandray andraikitra eo amin’ny firenena. Ankoatra izay, anisan’ny tanjona fototra ijoroan’ny fikambanana ny fandraisana anjara amin’ny fampisondrotana ny toe-karena, fiarovana ny tontolo iainana, ny fiarovana ny tanora, ny fanomezana sy famerenana ny hasin’ny soatoavina maha-Malagasy, ary ny ady amin’ireo endrika toe-javatra tsy rariny toy ny kolikoly izay manangoly ny firenena.
Ny 25 janoary, nisian’ny fivoriambe voalohany, ny 04 jona 2019 kosa no nijoro ara-panjakana ny fikambanana. Tao anatin’ny telo taona nialoha ny nijoroany, efa nanao hetsika sosialy samihafa ho fanatsarana ny maha-olona ny mpikambana.
MANAMA BAHRAIN : TONY ELUMELU JOINS JARED KUSHNER, LAGARDE, WORLD LEADERS TO LAUNCH US GOVERNMENT GROWTH STRATEGY FOR PALESTINE AND MIDDLE EAST